Magaalo Gob Ku Ah Barashada
Saturday September 09, 2017 - 10:24:27 in Maqaallo by Reporter Burco
Muddo toddoba gu' laga joogo deegaanka aan ku noolaa ayay ahayd. Toddoba sano ayaan nolol waayo badan ku qaatay oo barashadu saldhig u tahay.
Todoba ka saamayn badnaa intaan jiray. Waayo waa udub dhexaadka nolosha mustaqbal aan rajaynayo. Maalin kuma aan fikirin horteed intaanan iman. Mana filayo inay maalin maskaxdayda ka baxdo markaan ka tago. Si kedis iyo u kaadin u dhaxaysa ayaan ku umid. Waa isla wadankii iyo dhulkii oo kama foga magaaladii aan ku koray. Balse way ka waayo badan tahay.
Waa magaalo beereed, barashada iyo barbaartuna ku badan tahay. Buuro ayaa ku wareegsan. Dhexdeeda baabuur iyo bajaaj tiro beel ah ayaa ordaysa. Guryo bilic leh iyo dhul barwaaqeed ayay indhahaagu qabanayaan. Deegaan qabow cimilo ahaan, qaylo iyo sawaxan toona aan lahayn ayaa ah mucjiso ay leedahay. Kaliya cimiladu ma qabooba, bulshadeeda ayaa iyana qabow, odhaahdooda ayaa qabow. Dhul barwaaqeedka seeraha ee magaalada ku yaal ayaa bulsho badan casarkii qarisa.
Way badan tahay inta ruux ee maansooda markay yimaadeen horteedna laba eray isku gayn. Aragtidu markay dharagto. Cagaar mooyee caynkale arki waydo. Dhaguhu markay maqlaan odhaah hufan oo haboon. Sanka markuu uryo udgoon meel kastaba daadsan. Maskaxdu markay shaqayso ee degenaansho ku jirto. Waa hubaal intaas oo dhami markay jiraan inuu ruux kastaa hal-abuurayo. Markhaatina waxa u ah baaxada hal- abuurada, abwaanada iyo fanaaniinta ay ku leeyihiin seeska hiddaha iyo dhaqanka soomaalida.
Bu'da iyo hareerteeda waqooyi waa jaamacad, magaceeda lagu soo xasuusto. Jaamacad soo saartay kala badh aqoonyahanka iyo madaxda talisa waqtigan ee dugsigoogii sare ku qaatay dalka. Jaamacad ay ka soo baxeen badi macalimiinta iskuulada soomalilaan iyo wadamada jaarka ah wax ka dhiga. Jaamacad ay ka aflaxeen dhakhaatiir iyo aqoonyahan kale oo ku teedsan meel ay somaali joogto. Waa geed midho bixiyay kuna yaal dhul uu ku beermi karay, magaaladan.
Waa magaalo barasho, ilbaxnimo iyo nabad. Barashada iyadaa bilowda, waa astaan lagu yaqaan. Yar iyo weynba, barashadu waa u muhiimada koowaad ee nolosha. Tani waxay dhaxalsiisay ilbaxnimo soomaalida inteeda kale kaga horeeyaan. Iftiin ay dunida inteeda kale ku arkaan. Ilbaxnimadaas ayaa xaqiijisay inay noqoto deegaan nabdoon oo lagu soo hirto.
Nabada soomalilaan laga dhisay, magaaladani waa hoyga lagu dhisay. Waxay martigelisay dhammaan madaxda dhaqan iyo siyaasiyiin ee horjooga u ah bulshowaynta degen soomaalilaan. Muddo bil ah waxa lagu soo saaray heshiisyo nabadeed, walaalnimo iyo niyadsamaan, kuwasoo soomaalilaan ku tanaaday. Xukuumad ayaa lagu dhisay awood dawladnimo yeelatay. Sidaas ayayna ku noqotay hooyada nabada soomaalilaan.
Dhalinta ayaa ah cududa magaalada ugu badan, kuwaasoo ku midaysan hal ujeedo oo ah waxbarasho iyo horumar. Kulamo, xaflado iyo isku imaatin aqoonta sar u qaadideeda ah ayaa had iyo jeer ka dhaca. Balwada qaadka oo ku yar, waxay siisay fursad ay ku kulmaan, wax isku waydiiyaan, waxna ku bartaan iyaguna isku bartaan. kulamada kama maqnaadaan madaxdu, sidaasna waxay ku hantaan waayo-aragnimo iyo hiraal fog.
Diinta, waa magaalo diineed. Waayo waxa ku aasan culimo iyo awliyo tiro badan. Kuwaasoo magaalada iyo geeskaba kaga tagay saamayn diineed. Iyada oy hubaal tahay doorka culimada nooli ku leeyihiin dhalinta toosan, haddana gobolada galbeedka oo ay ku jirto ayaa ahaa magaalooyinka barashada diinta loo soo doonan jiray. Muddo qarniyo ahna ahayd hoyga barashada diinta.
Baahiyaha bulsho ee kala ah caafimaad, waxbarasho, deegaan nololeed intaba waa loo yimaadaa hadda. Waxa ka dhisan cisbitaalo, aan badnayd balse tayadoodu sarayso. Tiraba waa afar waaweyn oo takhasusyo kala duwani joogaan. Jaamacado tiraba dhowr ah baa ku yaal midi ugu weyn tahay, kaliya se ugu ma weyna magaalada iyo soomalilaan, balse waa jaamacadii ugu horeysay ee laga furay dhul ay soomaali degto.
Deegaan nabadu xididaysatay, soona saartay geed wada noolaansho la yidhaa ayaa u sahashay magaalada inay kulmiso soomaalida afarta jiho degta galbeed iyo bari, waqooyi iyo koonfur, kuwaasoo midina mid su’aalayn halkuu ka yimid iyo ciduu yahay.
Magaaladani waa deegaan aan aqoon qoriga balse yaqaan qalinka. Deegaan aan aqoon dagaalka balse yaqaan dulqaadka. Deegaan kala weynaanta iyo garashadu ku badan tahay. Taas oo yaraysay gacmo ka hadal, badalkeedana hadalku yahay ka la isku af garto ama la isku diido.
Maanta se dhamaystirka nololeed ee ganacsiga iyo dalxiiska ka mid ka yihiin ayaa ka dhigtay magaalo aad loo yimaad. Safarka safarada ugu badana lagu baxsho. Booqosho aan kala goos lahayna lagu yimaad.
Magaalada oo ku taal marin muhiim ah oo saddex waddan ku kulmaan, Soomalilaan, Jabuuti iyo itoobiya ayaa iyana sahashay is dhexgal, ganacsi iyo wax wada qabsi bulsheed. Waa cadayn kale oo horumarkeeda baaxada leh bulshooyinka kala duwan ku soo hiranayaan. Waana sababta ardaydu magaalo kasta oo soomali degto ka imanayso, kuwaa soo u baahnayn inay safaro dhul iyo dad barasheed waqtigooda ku bixiyaan. Waayo saaxiibadooda magaalooyinka kala duwan ka yimid ee nolosha wadaagaan, waxbarashadana wadaagaan ayaa uga filan, berina safiir u noqonaya hawlahooda u matala.
Uma malaynayo inaan sadaro iyo qoraaltoona ku cabiri karo magaaladaydan. Magaaladan noloshayda badashay. U malayn maayo maamuuskay iga mudan tahay inaan qoraal kuwada xusi karo. Balse waa erayo kooban oon ku xusayo magaalo 7 sanno aan ku noolaa, wax i bartay. Bulsho i bartay. Waa hubaal inay maanso ka haboonayd, waa se qaan ay igu leedahay. Mahadin iyo maamuus ayaan u hayaa magaalada iyo bulshada ku nool. Boorama, magaalo gob ku ah barashada. Jaamacada camuud, geedka garashada.
Dr.Bashiir Idiris Aw Cali